Zavatra maimaim-poana any Milan, dia lavitra | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | tanàna, General, Milan
Milan dia iray amin'ny toeran-kaleha lafo vidy indrindra any Italia, amin'ny heviny fa ho hitantsika hoe maninona no lafo kokoa ny raharaha ary mihena haingana ny teti-bolantsika. Tsy very maina ny toerana anaovan'ny lamaody sy haute couture azy, miaraka amina magazay avo lenta. Na izany aza, tsy hisakana antsika tsy hanana izany mankafy entana maimaim-poana any Milan mandritra ny fialantsasatra.
Raha mitady fampahalalana isika, any amin'ny tanàna rehetra misy zavatra mahafinaritra hahita maimaim-poana tanteraka. Tsy mila mandany vola be ianao raha fantatrao izany andro izany rehefa manolotra tapakila maimaimpoana ny tranombakoka, na fampisehoana tsy voaloa. Betsaka ihany koa ireo tsangambato azonao idirana nefa tsy mandoa vola, mba hahafahanao manao lisitra misy vidiny ambany hitsidihana an'i Milan.
1 Tsidiho ny Duomo
2 Fitsidihana an'i Castello Sforzesco
3 Mandehana mamaky ny valan-javaboin'i Milan
4 Jereo ny Galleria Vittorio Emanuele II
6 Jereo ny 'Sakafo hariva farany' an'i Da Vinci
7 Mandehandeha mamaky ny peratra volamena
Tsidiho ny Duomo
Ny Duomo dia katedraly Milan, ary ao amin'ny Kianja Duomo, toerana tena afovoany ary misy tsangambato hafa. Ilaina ny fitsidihana ny Duomo raha mandeha mankamin'ny tanàna isika, ary io no tandindon'i Milan, ary iray amin'ireo asany miavaka indrindra. Saingy tsy afaka mankafy azy io fotsiny isika avy any ivelany, fa avy ao anatiny ihany koa, satria maimaim-poana ny fidirana. Afaka mankafy atitany feno mistisialy isika, misy varavarankely misy fitaratra sy andohalambo. Mba handehanana any amin'ny faritry ny tampon-trano, misy gargoyles sy singa hafa, dia mandoa vola izy ireo.
Fitsidihana an'i Castello Sforzesco
Este trano mimanda naorin'ny Duke of Milan, Francesco Sforza, tamin'ny taonjato faha-XNUMX teo amin'ny trano mimanda medieval. Ity lapa ity dia sarotra iray manontolo izay ahitantsika tilikambo, rindriny, zaridaina, loharano, tokotany anatiny, ny matso ary koa ireo tranombakoka itoerany. Ao ny Museum Archaeological and the Museum of Natural History ary misy koa fampiratiana mitsangantsangana. Maimaimpoana ny mahita ny trano mimanda ary mamakivaky azy sy ny zaridainany, na dia tsy maintsy mandoa vola kely aza isika raha te hahita izay ao amin'ny tranombakoka.
Mandehana mamaky ny valan-javaboin'i Milan
El Sempione Park Izy io dia iray amin'ireo malaza indrindra any Milan. Ny tanàna rehetra dia samy manana ny velarany maintso maitso handosirana kely avy ao anaty korontana ao an-tanàna. Ao anatiny aza misy tranobe iray, toy ny Triennale na ny tranomboky Sempione Park. Amin'ny iray amin'ireo tendrony dia hitantsika ihany koa ny Arch of Peace, andohalambo mandresy izay mitovy amin'ny hita any amin'ny toerana hafa any Eropa toa an'i Berlin. Eto amin'ity toerana ity izay azontsika atao tsara indrindra dia ny miala sasatra kely aorian'ny fitsidihana sy hetsika maro be. Toerana andehanan'ny olona manao fanatanjahan-tena sy miala sasatra izy io.
Jereo ny Galleria Vittorio Emanuele II
Ny Galleria Vittorio Emanuele II dia a Habaka ara-barotra tamin'ny taonjato faha-XNUMX voatahiry tsara, izay toa hitondra antsika hiverina amin'izany fotoana izany indray. Ankoatr'izay dia mifandray mivantana amin'ny Piazza del Duomo amin'ny lafiny iray ary ny Piazza della Scala amin'ny lafiny iray. Amin'izany fomba izany dia afaka mahita azy rehetra amin'ny andro iray isika. Toerana iray andehanan'ny rehetra mandehandeha sy mankafy ireo magazay ao anatiny, izay ahitantsika ireo marika lafo vidy malaza indrindra, toa an'i Prada na Gucci. Mety tsy hahatakatra antsika ny teti-bola hividianana zavatra amin'izy ireo, saingy afaka mandeha mamaky ny galeriana isika ary maka ny sary rehetra tadiavintsika.
Raha tsy fantatrao izay hatao amin'ny iray tolakandro any Milan ianao, manomboka amin'ny 16:30 Maimaimpoana tanteraka ny fidirana amin'ny Gallery of Modern Art. Ao anatiny no ahitantsika sanganasa kanto ankehitriny, ary ny trano koa dia toerana ankafizinay, miaraka amin'ny fombany neoclassical. Maimaimpoana ny talata na dia manomboka amin'ny 14:00 tolakandro aza. Raha tia zavakanto isika dia afaka manararaotra satria maro ny tranombakoka ao Milan no karama.
Jereo ny 'Sakafo hariva farany' an'i Da Vinci
Raha te hijery ny asan'i Leonardo da Vinci dia ilaina ny mamandrika mialoha. Maimaimpoana izany amin'ny alahady voalohany isam-bolana, saingy satria anisan'ny asa be mpitsidika indrindra ianao, dia mila manao famandrihana amin'ny fotoana ampy ianao. Raha mahomby ianao dia ho afaka hahita maimaim-poana amin'ny iray amin'ireo sanganasa mahaliana indrindra an'ny mpanakanto italiana fanta-daza, 'Ny sakafo hariva farany'. Raha tsy misy fisalasalana, fotoana mety izany tsy tokony hihoarantsika raha mandeha any Milan isika.
Mandehandeha mamaky ny peratra volamena
Ny Golden Quadrilateral no antsoin'izy ireo hoe arabe ara-barotra indrindra eto an-tanàna amin'ny faritra vaovao. Io no faritra ahafahana mahita ny karazan-karazany rehetra orinasa haute couture, miaraka amin'ny marika tsara indrindra. Mazava ho azy fa mety tsy ho maimaim-poana izany rehetra izany raha manapa-kevitra ny hividy amin'ny ankamaroan'ireny fivarotana ireny isika, fa raha manapa-kevitra ny handeha fotsiny isika mba hidera ny varavarankely haute couture dia toerana tena mahafinaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Zavatra maimaim-poana any Milan, dia lavitra